China 321 ashisayo insimbi engagqwali ikhoyili steel Ukwakha futhi Factory | I-Huaxiao
Amandla we-Sino Stainless Steel mayelana 321 / 321H Kuyashisa isongwe insimbi engagqwali ikhoyili , 321 / 321H HRC
321 Ibanga elifanayo kusuka ezingeni elihlukile lezwe
Ingxenye ye-321 Chemical Chemical ASTM A240:
C：≤0.08 ，Si ：≤0.75 Mnu ：≤2.0 ，Cr ：17.0～19.0 ，Ni ：9.0～12.0，　S ：≤0.03 ，P ：≤0.045 N: 0.1, Ti: 5X (C + N) Min～ IMax
Ingxenye ye-321H Chemical ASTM A240:
C：0.04～0.1 ，Si ：≤0.75 Mnu ：≤2.0 ，Cr ：17.0～19.0 ，Ni ：9.0～12.0，　S ：≤0.03 ，P ：≤0.045 N: 0.1, Ti: 4X (C + N) Min～ IMax
321 / 321H impahla yomshini i-ASTM A240:
Incazelo cishe nge-321 / 321H insimbi engagqwali nokuqhathanisa ne-304 ejwayelekile
Kokubili u-304 no-321 bangama-steels angenawuchungechunge angama-300 futhi banokuhluka okuncane ekumelaneni nokugqwala. Kodwa-ke, ezimweni ezingamelana nokushisa kuka-500-600 degrees Celsius, kusetshenziswa insimbi engagqwali engama-321. Ngaphezu kwalokho, insimbi emelana nokushisa iye yathuthukiswa ngokukhethekile phesheya futhi ibizwa nge-321H. Okuqukethwe yikhabhoni kuphakeme kancane kunalokho okungama-321, okufana ne-1Cr18Ni9Ti yasekhaya. Inani elifanelekile le-Ti lengezwa ku-insimbi engenasici ukwenza ngcono ukumelana nokugqwala kwangaphakathi. Lokhu kungenxa yokuthi esigabeni sokuqala sokukhiqizwa kwensimbi engagqwali, ngoba ubuchwepheshe bokuncibilikisa bebungephakeme ngokwanele ukunciphisa okuqukethwe yikhabhoni ensimbi, bekukwazi ukufeza lokhu ngokungeza ezinye izinto. Ngokuthuthuka kobuchwepheshe, kuye kwenzeka ukukhiqiza izinhlobo zensimbi engagqwali enekhabhoni ephansi kanye ne-ultra-low-carbon. Ngakho-ke, kusetshenziswe kabanzi izinto ezingama-304. Ngalesi sikhathi, izici zokumelana nokushisa kwe-321 noma i-321H noma i-1Cr18Ni9Ti ziyabonakala.
I-304 iyi-0Cr18Ni9Ti, i-321 isuselwe ku-304 kanye ne-Ti ukuthuthukisa ukuthambekela kokugqwala okungaphakathi.
Insimbi engagqwali engu-321 okukhona kuyo iTi njengento yokuzinzisa, kepha futhi iyizinhlobo zensimbi enamandla ashisayo, ingcono kakhulu kune-316L ekushiseni okuphezulu. Insimbi engagqwali engama-321 kuma-organic organic wokugxila okuhlukile, amazinga okushisa ahlukene, ikakhulukazi ekumelaneni ne-oxidizing Medium ukumelana nokuhuzuka okuhle, okusetshenziselwa ukwenza amalayili nokuhambisa amapayipi eziqukathi ze-asidi ezingamelana nokugqoka kanye nemishini emelana nokugqoka.
Insimbi engagqwali engu-321 iyi-Ni-Cr-Mo yohlobo lwensimbi engenasici, ukusebenza kwayo kufana kakhulu no-304, kepha ngenxa yokwengezwa kwe-titanium yensimbi, inokumelana kangcono nokugqwala komngcele okusanhlamvu namandla okushisa aphezulu. Ngenxa yokwengezwa kwe-titanium yensimbi, ilawula ngempumelelo ukwakheka kwe-chromium carbide.
Insimbi engagqwali engu-321 inokusebenza okuhle kokucindezeleka kokuqhekeka kanye nokumelana nokushisa okuphezulu (i-Creep Resistance) izakhiwo zokuxineka zingcono kunezinsimbi ezingama-304.
Langaphambilini 310s ashisayo insimbi engagqwali ikhoyili
Olandelayo: 410 410s ashisayo insimbi engagqwali ikhoyili